Izindaba - Ukusetshenziswa kwento yokuhlunga insimbi engagqwali ku-coalescer
Ukusetshenziswa kwento yokuhlunga insimbi engagqwali ku-coalescer
Into yokuhlunga insimbi engagqwali ihlukaniswe yaba yisihlungi sesikrini, into yokuhlunga esintintsi sintered nento yokuhlunga sintering Okuluhlaza okwenziwe ngesici sintered filter mesh kwenziwa ngensimbi engagqwali sintered mesh. Insimbi yokuhlunga insimbi engagqwali isetshenziswa enhlobonhlobo yemishini yokuhlunga ukufeza umphumela omuhle wokuhlunga. I-Anping Hanke Filter Technology Co., Ltd Ngemishini yokukhiqiza ephelele nenqubo ephelele yokukhiqiza, sinikeza zonke izinhlobo zezixazululo zokuhlunga kumakhasimende ethu.
Namuhla, ngithanda ukwethula ezinye izinhlobo zohlelo lokusebenza lwento yokuhlunga insimbi engagqwali, isihlungi sikawoyela we-coalescence
Ukutholakala kwamanzi ohlelweni lokuthambisa u-hydraulic kuzodala uketshezi kukawoyela, kwenze uwoyela wehle, kunciphise ukushuba kwefilimu kawoyela, kunciphise ukuthambisa, kubangele ukuguqulwa kukaphethiloli kanye ne-polymerization kwakheke ama-macromolecule, kushintshe i-viscosity kawoyela, kwakheke ama-organic acid, bese udla ubuso bensimbi, unciphise noma ulahlekelwe amandla kagesi kawoyela. Okokuhlunga kwendabuko kanye nemishini yokuhlukanisa, kunzima kakhulu ukuhlukanisa uketshezi olulodwa kolunye. Isihlungi samafutha sokuhlukaniswa kwe-coalescence esakhiwe yinkampani yeXinxiang Rixin sihlanganisa ukucwenga ngokunemba nokoma okuphumelelayo, okungasusa ngempumelelo ukungcola kwamakhemikhali, amanzi emulsified namanzi amahhala emafutheni ngaphandle kokulimaza ikhwalithi yomkhiqizo wokuqala. Ngowoyela oqukethe inani elikhulu lamanzi, umphumela wokwehlukanisa uphawuleka ikakhulukazi, futhi ijubane lokwehlukanisa liphindwe kaningana kuya kweleshumi lejubane lokwehlukanisa ngokwesiko
1. Ukusetshenziswa kwesihlungi se-coalescence dehydration oil kufaka:
(1) Ukuhlanzwa kukawoyela we-turbine kanye ne-transformer oyela;
(2) Ukususwa kwamanzi kanye nokuhlanzwa kokususwa kokungcola kukawoyela ohlelweni lokuthambisa wokubacindezela;
(3) Xhuma uhlelo lokuthambisa lwe-hydraulic ukuthuthukisa ukuhlanzeka kohlelo.
Umgomo wezobuchwepheshe wokuhlunga uwoyela we-coalescence dehydration ngu: uketshezi oluhlukile lunokungezwani okuhlukile kwendawo, futhi lapho uketshezi lugeleza emgodini omncane, ukuncipha kobuso bendawo, isivinini esidlulayo siyashesha. Lapho uketshezi oluxubekile lwezigaba ezahlukahlukene lungena kusihlukanisi, kuqala lungena entweni yokuhlunga ye-coalescence. Isici sesihlungi se-coalescence sinendawo yokuhlunga enezingqimba eziningi, futhi ubukhulu bayo be-pore bukhuphula ungqimba ngongqimba. Ngenxa yomehluko wokuqina kobuso, uwoyela udlula kusihlungi ngokushesha, ngenkathi amanzi ehamba kancane. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yento ye-hydrophilic yesici sesihlungi se-coalescence, amaconsi amancane amanzi akhonjiswa ebusweni besendlalelo sesihlungi, okuholela ekubumbaneni kwamaconsi amanzi. Ngaphansi kwesenzo samandla e-kinetic, amaconsi amancane agijima ngokuvula futhi kancane kancane akha amaconsi amakhulu, bese ehlala ngaphansi kwesenzo samandla adonsela phansi futhi ahlukane namafutha. Ngemuva kokuhlanganisa uwoyela ngemuva kwento yokuhlunga, kusenamaconsi amanzi amancane aqhubekela phambili kusihlungi sesihlukanisi ngaphansi kwesenzo se-inertia. Isici sokuhlukanisa senziwe ngezinto ezikhethekile ze-hydrophobic. Lapho uwoyela udlula entweni esehlukanisayo, amaconsi amanzi ayavinjwa ngaphandle kwento yokuhlunga, ngenkathi uwoyela udlula entweni esehlukanisayo futhi uyakhishwa esitolo.
2. Izici zohlelo lokuhlunga uketshezi lokwehla kwamanzi emzimbeni zingokulandelayo:
Ihlanganisa imisebenzi emibili yokuhlunga ngokunemba nokusebenza kahle okuphezulu, futhi isebenze ubuchwepheshe obuphambili be- "coalescence separation" bokuqeda amanzi emzimbeni, obunokusebenza kahle okuphezulu kokuphelelwa amandla namandla anamandla. Ikakhulukazi ukwahlukaniswa kwenani elikhulu lamanzi ku-oyela, kunezinzuzo ezingenakuqhathaniswa zendlela yokugcoba nendlela ye-centrifugal, engaphula lonke isakhiwo se-emulsion kawoyela-amanzi phakathi; Ngokuhlungwa kohlelo lokuhlunga izinhlayiya, inhlanzeko yendawo ingalawulwa ngokuqinile esimweni esidingekayo sohlelo, ukuze kuqinisekiswe ukuhlanzeka kukawoyela: izakhiwo zomzimba nezamakhemikhali kawoyela azishintshiwe, futhi Isikhathi sokusebenza samafutha siyandiswa; ukusetshenziswa kwamandla kuncane futhi izindleko zokusebenza ziphansi; ukumiswa kwesistimu kuhle kakhulu futhi ukusebenza okuqhubekayo kokusebenza kunamandla, okulungele ukusebenza ku-inthanethi.
Uhlelo lokuhlunga izinhlayiyana: imidiya yokuhlunga yenziwe nge * * impahla yokuhlunga, futhi ukwakheka kwendawo enkulu yokuhlunga kungakuhluza ngempumelelo ukungcola kwezinhlayiya ezinhle kakhulu futhi kwenze imikhiqizo kawoyela ifinyelele ekuhlanzekeni okuphezulu kakhulu.
Uhlelo lwe-Coalescence: uhlelo lwe-coalescence lwakhiwa iqembu lezinto zokuhlunga ze-coalescence, ngakho-ke umnyombo wokuhlunga we-coalescence usebenzisa isakhiwo esiyingqayizivele se-polar molecular. Amanzi amahhala namanzi afakwe emafutheni aqoqelwa kumadonsi amakhulu amanzi ngemuva kokudlula entweni yokuhlunga, abese ezingena ethangini lokugcina amanzi ngaphansi kwamandla adonsela phansi.
Uhlelo lokwehlukanisa: isici sesihlungi sokuhlukanisa sohlelo lokuhlukanisa senziwe ngezinto ezikhethekile ze-hydrophobic. Lapho uwoyela udlula entweni yokuhlunga, amaconsi amanzi ayavinjwa engxenyeni engaphandle yesihlungi futhi ahlangane aze angene ethangini lokugcina amanzi ngenxa yamandla adonsela phansi.
Uhlelo lwamanzi: amanzi ahlukanisiwe agcinwa ethangini lokugcina amanzi. Lapho ukuphakama kwesixhumi esibonakalayo kufinyelela kunani elibekiwe, vula i-valve ukukhipha amanzi aze awele ezingeni eliphansi loketshezi. Vala i-valve bese umisa amanzi.
3. Lo mshini unamazinga amahlanu wohlelo lokuhlunga
(1) Class * * ukuncela ukuhlunga kusethwe ethekwini lokuncela uwoyela. Isihlungi se-coarse sivikela iphampu kawoyela futhi sandise impilo yokusebenza kwesihlungi esikhulu.
(2) Isihlungi sangaphambi kwesigaba sesibili sisethwe umfula we-coalescer. Ayikwazi ukwelula impilo ye-coalescer kuphela, kepha futhi inganciphisa okuqukethwe kwezinhlayiya kuketshezi oluhlungiwe.
(3) Isihlungi sesithathu se-coalescence senza amanzi ku-condense kawoyela futhi acwile.
(4) Isihlungi sesigaba sokuhlukanisa esine siqhubeka nokuvimba amathonsi amanzi amancane emafutheni ukufeza umphumela wokwehlukana.
(5) Ukusebenza kahle kwesihlungi semidiya nokusebenza kahle, kungasetshenziswa ukuhlanza uwoyela.
Lokhu okungenhla kuyisingeniso esifushane sesihlungi se-coalescence dehydration sophawu lwensimbi engenasici.